दोहोरी भिडन्त: चन्द्रकोटका पुरुष र मुसिकोटका महिला टोली बिच (भिडियो) – Gulminews
Home/भिडियो/दोहोरी भिडन्त: चन्द्रकोटका पुरुष र मुसिकोटका महिला टोली बिच (भिडियो)
दोहोरी भिडन्त: चन्द्रकोटका पुरुष र मुसिकोटका महिला टोली बिच (भिडियो)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ चैत्र २४, शनिबार ०२:०८ मा प्रकाशित
गुल्मीमा जारी तेस्रो गुल्मी महोत्सवमा सञ्चालन भईरहेको स्थानिय तह स्तरिय दोहोरी गीत प्रतियोगीताको बिभिन्न चराणको प्रतियोगिता चलिरहेको छ । सहभागी स्थानिय तहहरुबाट प्रथम चरण पार गरेर आएका मध्य बिहिवार चन्द्रकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका बिच दोहोर गीत प्रतियोगीता भएको छ ।
प्रतियोगीतामा मुसिकोट नगरपालिकाले अर्को प्रतियोगीतामा सहभागी हुने गरि अर्को चरणको लागि छनोट भएको छ । कृषि, पर्यटन र उद्योगको व्यापार प्रर्वदन गर्न भन्दै यही चैतको १६ देखि सुरु भएको महोत्सव आगामी २५ गते सम्म सन्चालन हुँदैछ ।
महोत्सवमा बिबिध साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु सहित ५ दर्जन भन्दा वढी कलाकारहरु महोत्सवमा प्रस्तुती दिईरहेका छन् । महोत्सवमा राष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न बिधामा चर्चाको शिखरमा रहेका कलाकारहरुसँगै गुल्मी जिल्लाबाट पनि राष्ट्रिय स्तर र स्थानिय कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने महोत्सवको साँस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक अनुपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसपालिको महोत्सबमा पनि अघिल्ला महोत्सबमा जस्तो लाईभ दोहोरी सर्वाधिक रुचाईएको प्रस्तुती बनेको छ । हरेक दिन जसो बिभिन्न कलाकारहरुको बिशेष लाईभ दोहोरी प्रस्तुती रहने पनि महोत्सब आयोजकहरुले जानकारी दिए ।
हेरौँ बिहीवार सम्पन्न चन्द्रकोटका पुरुष र मुसिकोटका महिला टोली बिचको यो लाईभ दोहोरी भिडन्त:
३ दर्जन मलामी सहित शव बोकेर गुल्मी आउँदै गरेको बस दुर्घटना बारे के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? हेरौँ स्थलगत रिपोर्ट:
२०७८ पुष १९, सोमबार ०४:४९ मा प्रकाशित
उड्ला त अब गुल्मीबाटै जहाज ? ड्रोन फुटेजमा यस्तो देखियो बन्दै गरेको रेसुंगा बिमानस्थल (भिडियो)
२०७८ मंसिर २, बिहीबार २२:०३ मा प्रकाशित
गुल्मीकी संगिता छोरा सहित कहाँ गएकी होलिन् ? श्रीमान् मिडियामा आएर सन्तोष देउजासँग यस्ता कुरा खोले
२०७८ कार्तिक १३, शनिबार ०३:३४ मा प्रकाशित